Gabadh soomali ah oo live soo gashay ðŸ¤œ
Posted on 26.04.2021 by Akinomi
Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Duuliye u dhashay dalka Shiinaha ayaa shaqada duuliyaha laga mamnuuca inta noloshiisa ka dhiman, ka dib markii haweeney ay isku sawirtay halka ay duuliyeyaasha fariistaan ee shirka diyaaradda. Sawirka oo la qaaday horraantii sannadkan waxaa laga qaaday duulimaad ka tirsan shirkadda diyaaradaha ee Air Guilin, taas oo u kala safreesay Magaalada Guilin iyo gobolka Yangzhou.
Sawiirkan wuxuu si weyn ugu baahay baraha bulshada toddobaadkan, taas oo keentay in shirkadda ay talaabo qaado.
Sawirka wuxuu muujinayaa haweeney sawir ku gashay halka duuliyeyaasha ka kaxeyaan diyaaradda, horteedana ay yaalaan cabitaano. Warbaahinta dalka Shiinaha ayaa kusoo warrantay in gabadha sawirka ka muuqata in ay tahay gabadh baratay duuliyenimo, ayna ahayd qof tababar ku jira, kana soo baxay jamaacadda Guilini ee dalka Shiinaha. Inkastoo shirkadda aysan kala cadeynin in sawirka ay gabadha gashay xilliga ay hawada ku jireen iyo inkale ayaa haddana dadka u dhuun daloola arrimaha duulimaadyada waxay sheegayaan in sawirka uu u muuqdo in la qaaday xilli ay diyaaradda hawada ku jirtay.
Duuliyaha oo aan magaciisa la sheegin ayaa laga mamnuucay in uu wax duulimaad ah sameeyo, inkastoo aysan kala cadeyn in shaqada laga eryay iyo in loo dhiibay shaqooyin kale. Shirkadda Air Guilin ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in duuliyahaas uu ku xadgudbay sharciga, maadaama uu qof caadi ah u oggolaaday halka laga wado diyaaradda. Waxay intaa raacisay in shaqaalihii kale ee arrintan ku lugta lahaa mudo kooban shaqada laga joojiyay, baaritaanna uu ku socdo.
Sida uu qabo xeerka duulista hawada ee dalka Shiinaha, qof rakaab ah looma oggola in uu gudaha u galo halka laga kaxeeyo diyaaradda, haddii aanu heysan fasax gaar ah ama aysan jirin xaalad daruuri ah.
Sannadkii hore shirkadda diyaaradaha ee Donghai Airlines ayaa shaqada mudo lix bilood ah ka joojisay, shatigiina kala laabatay, ka dib markii xaaskiisa uu u oggolaaday in ay gudaha u gasho halka diyaaradda laga kaxeeyo. Duuliye Shiinaha u dhashay oo shaqada ku waayay gabadh isku sawirtay kursigiisa 6 Nofembar Mowduucyada la xiriira Shiinaha.
Gadaal ilaa kor.Duulimaadka Diyaaradda Itoobiya Airlines ayaa imanaya saddex maalin kaddib markii ay dhaqan gashay amarkii dowladda Soomaaliya ku joojisay duulimaadyada caalamiga ah, si looga hortago cudurka Coronavirus. Diyaaradda Itoobiya Airlines ee kasoo dagtay Hargeysa ayaa kasoo duushay magaalada Adis Ababa ee dalka Itoobiya, waxayna siday rakaab tiro badan.
Dowladda Soomaaliya weli ma aysan ka hadlay diyaaradda Itoobiya ee ka dagtay Magaalada Hargeysa, inkastoo Wasaaradda Gaadiidka iyo Duuliska Hawada ay qoraal ka soo baxay ku sheegtay in muddo labo cisho la fasaxay duulimaadyada caalamiga, si muwaadiniinta ku xaniban caalamka loo soo qaado. Si kastaba, Ethiopia Airlines ayaa qoraal ay horey usoo saartay ugu sheegtay inay sii wadi doonto duulimaadyada Hargeysa, ayada oo Soomaaliya iyo Somaliland u kala saartay laba dal. Caasimada Online.
Xamdiya ayaa sheegtay in ayada iyo qoyskeeda ay maqaayadan oo ka agdhawayd tageen, waxay maqleen qaylida haweenay maqaayadan ka hawlgasha oo isla markiiba ku tiri " joojiya buuqa".
Xamdiya ayaa dalka Mareykanka ku timid qaxooti muddo tobbanan sano ah ka hor, sanadihii la soo dhaafay waxay u ololaynaysay caddaalad u helista dadka la takooro. Kaddib markii uu muran sii xooggaystay Xamdiya waxay sheegtay inay gaarigeeda intay meel dhigatay ay horay gudaha u gashay si ay oola hadasho dadka ka howl-gala maqaayadan.
Shaqaalaha ayaa wacay booliskakaddib markii ay booliska lahadleen Xamdiya iyo shaqaalaha maqaayadan waxayna sheegeen inay bilaabayaan baaris.
Muhaajiriin ay ku jirto gabadh 2 bilood jir oo Soomaali ah oo Rwanda lagu qaabilay
Mulkiilaha maqaayaan ayaa Arbacadii la kulmay Xamdiya, wuxuuna bixiyey raaligelin. Waxayna ka wada hadleen sidii dhacdadaan oo kale mustaqbalka looga hortagi laha. Gabadh Soomaali oo ku nool Mareykanka oo laga raaligeliyay takoor loo gaystay 18 Oktoobar Lahaanshaha sawirka Hamdia Ahmed Image caption Hamdia Xamdiya Axmed waa gabadh Soomaali ah oo 20 sano jir ah, waxa ay sheegtay in ayada iyo qoyskeeda inay takoor la kulmeen mar ay maqaayad dalabkooda ka sugaayeen waxayna sheegtay in lagu qabsaday sababta ay luuqaddeeda hooyo ugu hadashay.
Mowduucyada la xiriira Mareykanka. Gadaal ilaa kor.Hiiraan Online. Today from Hiiraan Online:. Soomaaliya oo sannadkii 4-aad ka qeyb gashay bandhig carweedka cunnooyinka caalamka oo Dubai lagu qabtay. Isniin, Feberaayo, 17, HOL - Soomaaliya ayaa sannadkii 4-aad oo xidhiidh ah ka qeyb gashay bandhiga caalamiga ah ee carwada cunnooyinka caalamka lagu farsameeyo iyo kheyraadka uu dalba leeyahay, taasoo lagu qabtay magaalada Dubai ee iskutagga imaaraatka Carabta.
Sharkado dalal shisheeya ah ayaad aad u xiiseynayey kheyraadka dalka Soomaaliya. Waxayna qaarkood u muuqdaan in ay heshiisyo kala saxiixandoonaan sharikadaha Soomaaliyeed ee ka soo qayb-galay carwadaan bandhiga cuntada ee Gulf Food Show. Bandhig carweedkaan sanadlaha ah oo sanadkiiba mar la qabto ayaa ah kan ugu weyn dunida ee lagu soo bandhigo cuntooyin kala duwan oo laga keenay dunida daafaheeda. Shirkaddo badan oo Soomaaliya ayaa sanad walba uga faaidaysta in ay wax soo saarkooda ganacsi kusoo bandhigaan suuqaan oo ay iskugu yimaadaan shirkado kala duwan, oo isagu jira kuwa wax iibinaya kuwo wax iibsanaya, maalgashadayaal, iyo shirkaddo dhiiro gelinaya badeecadaha, rabana iney kor qaadaan wax u dhoofinta.
Maraykanka oo ka hadlay duyuurad aan hore nuuceeda loo arag oo hawada Soomaaliya lagu arkay. Isniin, Feberaayo, 17, HOL - Ciidamada Cirka ee Mareykanka ayaa duulimaad ka mid ah kuwa loo yaqaan B Stratofortress ku sameeyay xeebaha Soomaaliyaiyagoo ku guda jiray howlo tababar. Xildhibaano kasoo jeeda Puntland oo sheegay in dowladda federalku ogolaatay bixinta shahaadada ardayda Puntland.
Daacish oo gudaha Puntland tababar ku siinaysa dagaalamayaal cusub oo ay qoratay. Isniin, Feberaayo, 17, HOL - Kadib guul darrooyin ay ISIS kala kulantay dagaaladii Alshabab kula gashay buuraha ku teedsan gobolka Bari, waxay kooxda soo bandhigtay dagaalamayaal cusub oo ay u bilowday tababar miltari. Ahlu Sunna '' Waa in la dhisaa Gole loo dhan yahay oo u xil saaran ilaalinta Federaalnimada''. Dowladda oo soo bandhigtay sarkaal ka soo goostay Ururka Al-shabaab.
Slain Somali journalist had received death threats - HOL. In a country that has endured three decades of chaos â€” from extremist attacks and environmental crises â€” the responders, medics, road-builders and educators are often not government workers, but young volunteers.
US responds as Turkish army penetrate northern Syria with 20, military vehicles - Xinhua.
The Turkish forces have brought in 2, military vehicles into northern Syria over the past 12 days, a war monitor reported on Saturday. Cloud clothing store caters to younger generation of Somali shoppers - ScTimes.
It's one room in a one-story brick building on East St. Germain St. But Jama has big plans.
- Ceeeb calayk - Daawo khaakhaan oo xaaskiisa qaawan live soo geliyey
Macy's department store-sized plans. Stores-around-the-world plans.Naadiya Cabdirisaaq Maxamed iyo Safiya Khaalid oo ah gabdho Soomaali ah ayaa ka mid noqday dadka guuleystay, kadib tartan adag oo ay u galeen doorashooyinka golaha deegaanka ee gobolo ku yaalla Mareykanka.
Gabadha koowaad oo ah Naadiya ayaa waxa ay ku soo baxday kursiga golaha deegaanka magaalada St Louis Park ee gobolka Minnesota, halka Safiya Khaalid ay ku guuleysatay golaha deegaanka magaalada Lewiston ee gobolka Maine ee dalkaasi.
Naadiya ayaa heshay boqolkiiba 63 codadkii la dhiibtay, halka ninkii la tartamayey uu isna helay boqolkiiba Sidoo kale waxa ay tilmaamtay inay dooneyso in ay wax ka qabato kirada guryaha oo ay sheegtay in ay tahay mid qaali ah, oo dadkana aysan awoodin in ay iibsadaan guryo raqiis ah.
Dhinaca kale, Cabdisalaam Aadan oo ah nin Soomaali ayaa isna sidoo kale ku guuleystay guddiga waxbarashada ee xaafadda Fridey ee isla gobolkaasi. Natiijooyinka ka soo baxay doorashooyinkan ayaa waxaa soo dhoweeyey Soomaalida Mareykanka oo muddooyinkii dambe taariikha cusub ka sameynayey dalkaasi.
Caasimada Online Xafiiska Minneapolis caasimada live. Caasimada Online. Home Warar Gabdho Soomaali ah oo ku guuleystay doorashooyinki ka dhacay Mareykanka.
Tim ayaa horay u ahaa la-taliyaha Ilhan Cumar ee arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka. Sanadkii hore xaaska Mynet oo lagu magacaabo Beth Mynett oo 55 sano jir ah ayaa dalbatay in la furo kadib markii ay shaacisay in seygeeda Mynet uu xiriir jaceyl la leeyahay Xildhibaan Ilhaan Cumar. Sidoo kale Ilhaan Cumar ayaa seygeedii hore ee Axmed Xirsi Bishii October ee sanadkii hore ka dalbatay inuu furo, waxayna isku dhaleen ilaa 3 caruur ah oo laba kamid ah yihiin Gabdho. Dhanka kale Axmed Xirsi ayaa dhowr bil kadib ku aqal galay gudaha Soomaaliya, waxaana sidaas kusoo afjarmay noloshii ay muddo wadaagayeen Ilhaan iyo Axmed.
Falkaasi foosha xun ayaa xili habeenimo ah ka dhacay deegaanka Tuurka oo ka tirsan degmada Lughaya, sida ay Caasimada Online u xaqiijiyeen dad deegaanka ah. Wararka ayaa sidoo kale intaasi ku sii daraya in Ciidamada Booliska Somaliland ay gacanta ku soo dhigeen Ninkii falkaasi fuliyey kadib muddo saacado ah oo baxsad ahaa.
Waxaana Ninkaasi loo soo qabtay falkaasi, isla xalayba loo soo wareejiyay xabsiga weyn ee magaalada Boorama, halkaasi oo uu ku xirnaan doono ilaa inta kiiskiisa maxkamadi xukumeyso.
This entry was posted in Gabadh soomali ah oo live soo gashay. Bookmark the permalink.
Responses to Gabadh soomali ah oo live soo gashay
Yogami on Gabadh soomali ah oo live soo gashay